अञ्जु पन्तको भाइरल तस्बिरः के हो बास्तविकता ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार २३:४२ English
अञ्जु पन्तको भाइरल तस्बिरः के हो बास्तविकता ?
मंगलबार साँझदेखी गायीका अन्जु पन्तका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् । हावाहुरीमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई भेट्ने बाहानामा गायीका पन्त बारा पुगेर धर्म प्रचारमा लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा हुनसम्म विरोध भएको छ ।
गाडीको डिकीमा झोला र किताब कपी जस्ता देखिने सामान राखेर छेउमा पन्त उभिएको तस्बिर भाइरल छ । यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नेले पीडामा पनि धर्म प्रचार गरेको भन्दै गालीगलौजका शब्दहरु लेखेका छन् ।
तर गायीका पन्त बारा नगएको पाईएको छ । रेडियो नेपालको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी आधुनिक संगीत प्रतियोगिताको निर्णायकको भूमिकामा छिन् ।
छोटो संवादमा पन्तले आफू चाहेर पनि बारा जान नपाएको तर सहयोग भने पठाएको बताएकी छिन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको तस्बिर ५ डिसेम्बर २०१८ मा फेसबुकमा उनले राखेकी थिईन । त्यतिबेला उनी बारा र पर्साकै विभिन्न ठाउँमा आफ्नै नामको अञ्जु पन्त फाउण्डसेनमार्फत सहयोग गर्न गएकी थिईन् । सोही बेलाको तस्बिरलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा राखेर आफूलाई नैराश्यता अनूभुत गराउने काम भएको भन्दै उनले दुखेसो पनि गरिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पुरानो तस्बिर राखेर के आधारमा धर्म प्रचारकको संज्ञा दिईयो ? उनले दुखी हुँदै भनिन् ।
२० चैत्र २०७५, बुधबार १५:१९ मा प्रकाशित
कथा हतार गरेर हुन्छ त ! २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार २१:०४
चार मुक्तक	११ जेष्ठ २०७७, आईतवार १०:४७
यी हुन महानगरलाई कर नतिर्ने ‘फिल्म हल’ (सूचीसहित)	११ भाद्र २०७६, बुधबार १३:०६
कलापुञ्ज पाँचौँः एउटै चित्रको मूल्य रु १५ लाख	१० भाद्र २०७६, मंगलवार ०२:३१